तिनको सेवाद्वारा हजारौँ मानिसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने मौका पाए – Bachan Tv
BACHAN TV December 3, 2017
राजधानीको माइतीघरस्थित एउटा कलेजको नाउँ रहेको छः सेन्ट जेभियर्स कलेज, माइतीघर (चित्रमा हेर्नुहोस्) । ख्रिस्टाब्द १९८८ मा स्थापित यो कलेज २९ वर्ष पुरानो हो । यस कलेजको नाउँमा एक जना व्यक्तिको नाउँ जोडिएको छ जसको नाउँ होः जेभियर । यिनको नाउँमा नेपालमा कम्तीमा पनि चारवटा शैक्षिक संस्था स्थापना गरिएका छन् भने संसारभरि कम्तीमा पनि १८० ओटा शैक्षिक संस्था खोलिएका छन् । को हुन् जेभियर?
ख्रिस्टाब्द १५०६ मा वर्तमान स्पेनको भूमिमा जन्मिएका फ्रान्सिस जेभियरले आफ्नो जीवन मोजमज्जामा बिताएका थिए । तिनको परिवारमा जन्मेका पाँच जना सन्तानमध्ये तिनी कान्छा थिए । तिनका बुबा आमाले तिनी मण्डलीको सेवामा उत्रेको चाहना राखे तापनि तिनी बागी बने । संसारको सुखचैनमा रमाउन चाहने जेभियर समय बित्दै गएपछि संसारका ती कुराहरूबाट पनि वाक्क बने ।
यसै क्रममा जेभियरको भेट इग्नेसियस लोयोला नाउँ गरेको समर्पित ख्रीष्टियान व्यक्तिसित भयो । एक रात ती दुई जना बातचित गर्दै थिए । लोयोलाले मत्तीको सुसमाचारमा उल्लिखित येशूको भनाइलाई उद्धृत गरे, “सारा जगत् प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने, मानिसलाई के लाभ हुन्छ ? अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ ?” (मत्ती १६:२६) । येशूका यी वचनहरूले तिनको ह्दयलाई डामे । तत्काल तिनले आफ्नो जीवन येशूमा समर्पित गरे ।
परमेश्वरले जेभियरलाई यति अद्भूत रूपमा चलाउनुभयो कि तिनी मण्डली इतिहासकै महान्‌तम मिसनरीहरूमध्ये एक बने । तिनी येशूको समाज नामक संस्थाका सह-संस्थापक हुन् । ख्रीष्टियान मिसनरीहरू नपुगेका विभिन्न मुलुकहरूमा तिनी पहिलो पटक येशूको सन्देश लिएर गए । तिनले संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा येशूलाई चिनाए । तिनको सेवाद्वारा हजारौँ मानिसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने मौका पाए ।
३ डिसेम्बर १५५२ मा ४६ वर्षकै उमेरमा तिनी यस धरतीबाट बिदा भएर गएका थिए ।
वृहत धन्यवाद प्रार्थना कार्यक्रम सम्पन्न
येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ (भाग ३)